तपाइँको साइट मेट्रिक्स सुधार गर्न Semalt बाट साधारण युक्तिहरू
त्यहाँ शाब्दिक रूपमा धेरै ट्यूटोरियलहरू छन् तपाईलाई गुगल एनालाइटिक्स खाता बनाउने प्रक्रिया अधिक बुझ्नको लागि मद्दतको लागि खोजी गर्न। अवश्य पनि, तपाइँको वेबसाइटमा कसरी एनालिटिक्स उपकरण सेट अप गर्ने भन्ने थाहा पाउँदैन। कुरा के हो भने, तपाईं स्क्रिप्ट थप्न सक्नुहुनेछ अझै पूरा फाइदा उठाउन असफल। तपाईं कसरी आफ्नो साइटको मेट्रिक्स सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
यो सुझाव Artem Abgarian, को वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक द्वारा प्रस्तावित Semalt , तपाईंको डाटा को शुद्धता सुधार गर्न र तपाईं अचम्ममा छोड्न हुनेछ रिपोर्ट उत्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ।
आफैलाई बहिष्कार गर्दै - तपाइँ कति पटक आफ्नो वेबसाइट जाँच गर्नुहुन्छ? के तपाईं सचेत हुनुहुन्छ के तपाईं निश्चित आईपी ठेगानाहरूबाट ट्राफिक बहिष्कार गर्न सक्नुहुन्छ? यसले तपाईंको साइटको मेट्रिक्सको शुद्धतामा सुधार ल्याउँछ।
आन्तरिक खोजी - तपाइँको वेबसाइटमा यो सुविधा थपेर तपाइँ भन्न सक्नुहुनेछ कि कुन कुञ्जी शव्द वा वाक्यांश आगन्तुकहरू तपाइँसँग पुग्न प्रयोग गर्छन्। त्यो राम्रो छ, हैन?
भूत रेफरलहरू - के तपाईंले कहिल्यै अप्रासंगिक, अनौंठो साइटहरूको समूह देख्नुभयो जुन तपाईंको रेफरल रिपोर्टमा देखा पर्दैछ? तिनीहरू तपाईंको प्रोफाइलमा डाटा थप गर्दछन् आशा छ कि तपाईं तिनीहरूसँग व्यवसाय गर्नुहुन्छ।
आगन्तुकहरू संलग्न गराउनुहोस् - ग्राहकहरू बनेका आगन्तुकहरूको अनुकूलित क्षेत्र सिर्जना गर्न तपाईं रिभर्स ईन्जिनियरिंग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यस तरिकाले तपाईं आफ्नो साइटको प्रदर्शनलाई समयको साथ मोनिटर गर्न सक्नुहुनेछ।
उद्देश्यहरू - तपाइँ भ्रमणकर्ताहरू तपाइँको वेबसाइटमा अवतरण गर्दा तपाइँ के गर्न चाहनुहुन्छ? के उनीहरूले ठीक त्यस्तै गरिरहेका छन्? गुगल एनालिटिक्सले तपाईंलाई यसको मापन गर्न मद्दत गर्दछ।
गुगल एनालिटिक्समा तपाईंको आफ्नै ट्राफिक बाहेक
डाटा स्किउ हुनबाट जोगिन, तपाईंको आईपी ठेगानाबाट वेब ट्राफिक बहिष्कार गर्नुहोस्। आन्तरिक यातायात तपाईंको लागि डाटा गडबड हुन नदिनुहोस्। यहाँ कसरी छ:
तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा जानुहोस् र साइन इन गर्नुहोस्
'व्यवस्थापक' ट्याबमा जानुहोस् र त्यसपछि तपाईं फिल्टर थप्न चाहानुभएको सम्पत्ति पछि खाता चयन गर्नुहोस्।
क्लिक + फिल्टर गर्नुहोस् तब प्रोम्प्टको रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्।
"मेरो आईपी के हो" जस्ता सेवाहरूको प्रयोग गरेर तपाईंको आईपी ठेगाना खोज्नुहोस् त्यसपछि यसलाई कहाँबाट सार्नुहोस्।
फिल्टरमा आईपी ठेगाना थपे पछि परिवर्तनहरू बचत गर्नुहोस् र फिल्टर लागू गर्नुहोस्। अब तपाइँ जानु राम्रो छ।
आन्तरिक खोजीहरू सक्षम पार्दै
तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा जानुहोस् र साइन इन गर्नुहोस्।
प्रशासनमा जानुहोस्, त्यो खाता खोल्नुहोस्, सम्पत्ति प्लस दृश्य जुन तपाईं साइट खोजी सक्षम गर्न चाहानुहुन्छ।
'दृश्य सेटिंग्स' को छनौट गर्नुहोस्, र कतै प्यानलको मुनिको छेउमा तपाईं साइट-खोजी सेटिंग्स देख्नुहुनेछ
साइट खोज ट्र्याकिंग विकल्प सक्षम गर्नुहोस्
क्वेरी प्यारामिटर प्रविष्ट गर्नुहोस् ('s' वर्डप्रेस साइटहरूका लागि) र त्यसपछि बचत गर्नुहोस्।
भूत रेफरलहरू विभाजित गर्दै
तपाईको गुगल एनालिटिक्स खातामा साईन ईन गर्नुहोस्
कुनै रिपोर्टिंग पृष्ठमा जानुहोस्, र तपाईं एक + जोडिएको खण्ड विकल्प देख्नुहुनेछ। चयन गर्नुहोस् र नयाँ खण्ड थप्नुहोस्
खण्डलाई नाम दिनुहोस् र सर्तहरूमा क्लिक गर्नुहोस्
फिल्टर सेटअप >> सत्र सत्र >> >> बाहेक साथसाथ स्रोत >> मिल्दो रेजेक्स
सबै | डोमेनहरू जोड्नुहोस् तपाईसँग | प्रतीक
संलग्न यातायात निगरानी
फिल्टर सेट अप गर्नुहोस् >> सत्र >> थप सत्र समावेश गर्नुहोस्> 60० वा वैकल्पिक रूपमा अनन्य स्क्रिन दृश्यहरू >> पर्सन >> १
तपाईं त्यसपछि सens्लग्न आगन्तुकको प्रदर्शनमा निर्भर पर्दाहरू वा समय अवधि समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
निगरानी गोल प्रदर्शन
गुगल एनालिटिक्स खातामा साईन ईन गर्नुहोस्
प्रशासन, खाता, सम्पत्ती, र दृश्यमा जानुहोस्
निर्वाचित लक्ष्यहरू; + नयाँ लक्ष्य
लक्ष्य विवरण र विवरणहरूको सेट पूरा गर्नुहोस्, र तपाईं जानु राम्रो हुनुहुन्छ।